राष्ट्र बैंकसहित १५ बैंकको पैसा चोर्ने ह्याकरको धम्की : नडराउनु तर सतर्क रहनु- राष्ट्र बैंक - Arthatantra.com
राष्ट्र बैंकसहित १५ बैंकको पैसा चोर्ने ह्याकरको धम्की : नडराउनु तर सतर्क रहनु- राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । सिस्टम ह्याकरले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित १५ वटा वाणिज्य बैंकबाट पैसा चोरी गर्ने धम्की दिएको छ । ह्याकरले त्यस्तो धम्की दिएपनि राष्ट्र बैंकले भने धम्कीको पछि नलाग्न, नडाराउन तर सतर्क रहन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई फोन र इमेल मार्फत राष्ट्र बैंकसहित १५ वटा बैंकको सिस्टम ह्याक गरेर पैसा चोर्ने धम्की आएको थियो । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले यस्ता धम्कीको पछि नलाग्न तर सबैलाई सतर्क भने रहन आग्रह गर्नु भएको छ ।
ह्याकरले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित कुमारी बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबि बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल एसबीआइ, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालय बैंकको सिस्टम ह्याक गरेर पैसा चोर्ने धम्की दिएको छ ।
बुधबार यस्तो धम्की आएलगत्तै राष्ट्र बैंकले आफ्नो सिस्टम चेक गरेको र आज पनि कार्यालय सुरु हुनु अगावै सिस्टमको परीक्षण गरेको र त्यस्तो कुनै समस्या नरहेको पोखरेलले बताउनुभयो ।
उक्त धम्की सँगै नाम किटान गरिएका सबै बैंक र राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सतर्क रहन भनिएको पोखरेलले अर्थतन्त्रलाई बताउनुभयो ।
‘हामीबाट लाईसेन्स लिनु भएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुराकानी भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘उहाँहरु कसैको सिस्टममा पनि अहिलेसमम कुनै पनि समस्या आएको छैन, अहिलेसम्म सबैको सिस्टम सुरक्षित नै छ ।’
ह्याकरले इमेल नै गरेको भनेपनि कसैको पनि इमलेको इनबक्समा नआएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । इमेलमा आएको भने आईपी टे«स आउट गरेर कसले कहाँबाट पठाएको हो भन्ने थाहा पाइसक्ने भएपनि अहिलेसम्म इमेलमा नभएको पोखरेलको भनाई छ । ह्याकरले भने इमेल मार्फत २४ घण्टाको समय दिइएको छ ।
उहाँले यो सबै हल्ला मात्रै भएको र हल्ला भएजस्तो इमेल नआएको भन्दै सबैलाई सहज रुपमा कारोबार गर्न गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
ह्याकरको इमेल आएको चर्चपछि राष्ट्र बैंकका साथै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो आइटी विभागलाई निकै सकृय बनाएका छन् । ह्याकरले नाम नै तोकेर इमेल पठाएको स्क्रिन सर्ट बाहिरिएपछि सबै सतर्क बनेका हुन् ।
वि.सं.२०७८ साउन ७ बिहीवार १२:१६ मा प्रकाशित
अघिल्लाे २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दै लक्ष्मी उन्नती कोष, बुक क्लोज कहिले ?
पछिल्लाे छुट्ला है प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ५ लाख ४८ हजार कित्ता सेयर ? भोलि आवेदन दिने अन्तिम दिन